Saddex Ciyaaryahan Oo Khadka Dhexe Ah Ayaa Diiday Inay U Dhaqaaqaan Manchester United
HomeWararka CiyaarahaSaddex ciyaaryahan oo khadka dhexe ah ayaa diiday inay u dhaqaaqaan Manchester United
Tababaraha soo socda ee Manchester United Erik ten Hag ayaa lagu eedeeyay in lagu wargaliyay in seddex ka mid ah bartilmaameedyada khadka dhexe ee kooxda ay diideen u dhaqaaqista Old Trafford xagaaga.
Paul Pogba iyo Nemanja Matic ayaa labaduba qarka u saaran inay ka tagaan Red Devils dhamaadka xilli ciyaareedkan, taasoo u horseedi doonta kooxdu inay suuqa soo socda keento ugu yaraan hal khadka dhexe oo cusub.
Jude Bellingham oo u ciyaara Borussia Dortmund , Kalvin Phillips oo Leeds United uiyo Declan Rice oo West Ham United uciyaara ayaa lagu soo waramayaa in lagu daray liiska xiddigaha ay kooxdu doonayso suuqa xagaaga.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay Daily Star , dhammaan seddexda ciyaaryahan ayaa diiday inay u dhaqaaqaan Manchester sanadkan.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Dortmund aysan dooneynin inay u ogolaato Bellingham inuu ka tago isla daaqaddii Erling Braut Haaland , halka ciyaaryahanka khadka dhexe loo maleynayo inuu u janjeero u dhaqaaqista Liverpool marka uu ugu dambeyntii u dhaqaaqo.
Phillips ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inuu yahay bartilmaameedka koowaad, laakiin ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa la rumeysan yahay inuusan u diyaarsaneyn inuu halis geliyo xiriirka uu la leeyahay taageerayaasha Leeds isagoo ku biiraya kuwa ay xafiiltamaan.
Mustaqbalka Rice ayaa ah mowduuca si weyn loo hadal hayo, iyadoo West Ham lagu soo waramayo inay miiska u saartay qandaraas sideed sanno ah oo ay ku qaadaneyso xiddiga heerka caalami ee dalka England.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa lagu eedeeyay inuu ku wargelin doono Hammers inuusan diyaar u aheyn inuu saxiixo heshiiska dheer, laakiin kooxda David Moyes uma badna inay ku iibiyaan wax ka yar 150 milyan ginni, halka la fahamsan yahay in Rice uusan ku biiri doonin Man United xagaagan ka dib markii ay ku guuldareysteen. si ay ugu soo baxaan Champions League xilli ciyaareedka soo socda.
Ten Hag ayaa si rasmi ah u bilaabi doona shaqada tababarenimo ee Red Devils dhamaadka xilli ciyaareedkan, laakiin tababaraha reer Holland ayaa ku lug lahaa wadahadalada suuqa kala iibsiga ee kooxda todobaadyadii u dambeeyay, waxana uu dhawaan si buuxda u soo jeedin doonaa Old Trafford, isagoo haatan ku hogaamiyay Ajax. horyaalka Eredivisie .
Frenkie de Jong oo Barcelona kaayaa sidoo kale si xoogan loola xiriirinayaa inuu u dhaqaaqayo Old Trafford, iyadoo warbixin dhawaan soo baxday lagu sheegay in u wareegida Manchester ‘95% la sameeyay’.
Dhibaatada dhaqaale ee kooxda reer Catalan ayaa lagu eedeeyay inay horseedi doonto inay u ogolaato xiddiga heerka caalami ee dalka Netherlands inuu xagaagan kaga tago lacag dhan €80m (£69m).
Ten Hag ayaa loo maleynayaa inuu haysto ku dhawaad ​​100 milyan ginni si uu ugu qarash gareeyo saxiixyada cusub xagaagan, laakiin tirada ayaa kordhin karta iibka ciyaartoyda, halka ay jiri doonto boos badan oo miisaaniyadooda dhamaadka xilli ciyaareedka, sida Pogba, Jesse Lingard . , Juan Mata , Matic iyo Edinson Cavani ayaa dhamaantood ku baxaya beeca xorta ah.
Sida aan soo sheegnay, Man United ma awoodi doonto inay u soo bandhigto kubbada cagta Champions League saxiixyada cusub xilli ciyaareedka soo socda, iyadoo kooxda ay la dagaalanto West Ham United booska lixaad ee kala sarreynta Premier League .
Kooxda 20-ka jeer ku guuleysatay horyaalka Ingariiska ayaa xilli ciyaareedkeeda ku dhameysan doonta meel ka baxsan Crystal Palace isbuuca soo socda, halka West Ham ay labada Manchester City iyo Brighton & Hove Albion u hareen inay ciyaaraan.